Umkhiqizi kanye neFektri engu-YC-170 eyi-Wire Cutter Panda Cookies Enkulu Yomkhiqizo kanye neFektri | Yucheng
I-YC-170 Wire Cutter Panda Cookies Machine Production Line
I-YC-170 i-wire cutter panda cookies Umugqa wokukhiqiza umshini usetshenziselwa amakhukhi ocezu oluhlukile, njengamakhukhi e-panda, ikhukhi lokuma, ikhukhi lobuso obumomothekayo, amakhukhi ayisikwele ayi-9, njll.
I-YC-170 Wire Cutter Panda Cookies Machine Production Line ingu-Professional panda amabhisikidi amakhukhi encrusting umshini osebenza ngocingo umsiki wedivayisi ongenza amakhukhi amaningi anephethini afana ne-panda cookies, amakhukhi we-Penguin, amakhukhi enhliziyo, amakhukhi we-mosaic, amakhukhi we-slicer njalonjalo. Futhi ungasebenzisa lo mshini ukwenza ibhola lamandla, amaprotheni amabhola, idethi yebhola, ibhola lamantongomane, i-maamoul, i-kebbeh, i-coxinha, ibha yezithelo, ama-croquette, i-mochi ice cream namakhukhi ahlukahlukene agxishiwe ...
Umshini wamakhukhi we-othomathikhi we-othomathikhi angashintsha ukujiya kwesikhumba okuhlukile, ubude, usayizi wamakhukhi ngokugcwalisa noma ngaphandle kokugcwalisa.Umshini ombala kabili wekhukhi yi-PLC uhlelo oluhlakaniphile lokulawula ngesikrini sokuthinta, umsebenzi wememori yesitoreji; Idizayini ehlanganisiwe kulula ukusebenza, ukufakwa, ukugcinwa kanye ukuthuthwa kwendle; Isisindo somkhiqizo, usayizi nokugcwalisa ikhebula kungalungiswa njengesicelo kalula; Imisebenzi eminingi ukukhiqiza izinhlobo ezahlukene zokudla ngokushintsha isikhunta kalula; Izinto ezinophawu lwenziwe ngechina noma zingenisiwe.
Umshini wokusika amakhukhi wocingo uyatholakala nokwenza izinhlobo ezahlukene zamakhukhi:
amakhukhi ombala ophindwe kabili, amakhukhi kaMose / amakhukhi e-lattice, ikhukhi lephethini, amakhukhi agobekile, amakhukhi agcwalisiwe, Ikhukhi eligcwele eligcwele , njll.
Lo mshini wokugcwalisa osebenza ngemisebenzi eminingi, ungenza amabhisikidi, amakhukhi e-chocolate chip, amakhukhi afriziwe kanye nezinhlobo zokudla ezingaphezu kwezingu-100.Ukuze wenze amakhukhi ahlukile, umane udinga ukushintsha isikhunta, esingabuye senziwe ngokwezifiso.
Umshini wokufaka othomathikhi ungashintsha ubukhulu besikhumba obuhlukile, ubude, ubukhulu bokudla. Umshini wokufaka othomathikhi ungashintsha futhi isikhunta esihlukile sokwenza imikhiqizo yokudla ehlukile emile.
Umshini wokufaka othomathikhi ungenza futhi amaqebelengwane okugcwalisa / okufaka okufana neKubba (kibbeh), iFalafel, i-mooncake, i-maamoul, ikhekhe likaphayinaphu, i-mochi, i-ice cream mochi, i-meatball, i-energy ball, amakhukhi agcwele, ibha yezithelo, ibha yetshokholethi, njalonjalo (Ukudla okuhlukile nedivayisi ehlukile). Ukugcwaliswa kungaba i-jam, ushokoledi, i-mochi, i-ayisikhilimu mochi, unamathisela ubhontshisi, inyama egayiwe, unamathisele kuxutshwe namantongomane amancane (i-sesame, ummbila, amantongomane), njll.
Umshini wokufaka auto ungenza futhi ukudla okungezansi:
amakhekhe wethanga, amakhekhe esimnandi, amakhekhe athambile, amakhekhe omfazi, ophaya benyama, ama-bhisikidi ama-tambun, i-rocmia, njll.
Langaphambilini Okuzenzakalelayo ifektri ukusetshenziswa kwezimboni ravioli dumpling ukwenza umshini
Olandelayo: YC-168 okuzenzakalelayo Amaphrotheni Ball Machine
panda amakhukhi umshini
umshini wokusika amakhukhi wocingo